pressure मा तोडिएका युवा प्रेमहरु.........
1 - Feb-2019, Posted by: Yuwahunkar | COMMENTS: 0
भुवन के. सी. (जेरोम्
काठमाडौं, माघ यो संसार प्रेममा नै अडिएको छ । यदि प्रेम नहुदो हो, संसार आज यो अवस्थामा आउने थिएन । प्रेम कै कारण सिंगो प्रकृतिचलायमान भएको छ । प्रेम मानिसमा मात्रहुदैन । सबै चराचर जीवहरुमा एकआपसमाप्रेम हुन्छ, प्रेम गर्छन, आफ्ना भावना,सुखदुख साटासाट गर्छन । फरक यति मात्रहो मानिसहरुले कुरा गरेर, आफ्ना भावनाहरुसाटासाट गर्छन, अन्य प्राणीहरुले कराएर, हेरेरभावना साटासाटा गर्छन । खैर जे होस प्रेमसबैमा हुन्छ, फरक व्यक्त गर्ने तरिकामा मात्रहो । युवा हुंकारको यो अंकमा हामीले यस्तैयुवा प्रेम प्रेमका कुराहरुलार्इृ आवरण बनाएकाछौं ।वास्तवमा साँचो प्रेम भनेको जीवनलाईसहज बनाउने बाटो हो । जहाँ प्रेम हुन्छ,त्यहाँ सबै कुरा हुन्छ, सबै कुरा राम्रा हुन्छ,जहाँ प्रेम हुदैन, त्यहाँ केही पनि हुदैन । सबैकुरा नराम्रा हुन्छन । आज बिश्वमा मानवमानव बिचमा जति पनि घटना, दुर्घटनाहरुभएकाछन, ति सबै प्रेमको अभावमा भएकाहुन । वास्तवमा त्यहाँ प्रेम हुन्थ्यो भने, एउटादेशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकलाईसम्मान गथ्र्यो, एउटा जातीले अर्को जातीकोमानिसलाई सम्मान गथ्र्यो, एउटा धर्मकोमान्छेले अर्को धर्मको मान्छेलाई सम्मान गथ्र्यो। अहिले बिश्वमा जति पनि द्धन्द्ध भएको छ,हत्या हिंसा भएको छ, प्रेमको अभावको भएकोहो, बिश्व बन्धुत्वको अभावमा भएको हो । योअभावलाई चिर्नको लागि पनि मानव मानवबिच प्रेम, हुनु आवयस्क छ, प्रेम हुनु आवस्यकछ । मानव मानव बिचमा प्रेम भएको खण्डमाहामीले सिंगो प्रकृतिलाई प्रेम गर्न सक्ने छौं,सिंगो चराचर जगतलाई प्रेम गर्न सक्ने छौ। वास्तवमा नै भन्नु पर्दा प्रेम राम्रोको लागिहुनुपर्छ, समृद्धि र शान्तीको लागि हुनु पर्छ ।जहाँ प्रेम छ, त्यो परिवार, साथीभाई, समाजअनि सिंगो देश नै शान्त र शौम्य हुन्छ ।समृद्धिमा अगाडि जान्छ । जहाँ प्रेम हुदैन,त्यो परिमावार, समाज, देश द्धन्द्धमा जान्छ,अभाव र अत्याचार बढ्छ । हत्या, हिंसा,चोरी, डकैती, लुटपाटले समाजलाई अशान्तबनाउँछ । रोग, भोग र शोकले जरा गाड्छ ।यस अर्थमा, सिंगो परिवार, समाज, देश हुदैसिंगो बिश्वलाई शान्त बनाउनको लागि प्रेमचाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, त्यही प्रेम र प्रेमकोबिजरोपपण गर्नको लागि युवा हुंकारले योअंकको आवरण बिशेषगरी युवा प्रेम प्रेममाकेन्द्रित गरेको हो ।यो आवरमा हामीले बिविध शिर्षक दिएरकथाहरु समेटका छौं । धेरै कथाहरु वास्तविकछ, केही कथाहरु काल्पनिक भएपनि अहिलेकोसमाज अनुसार यथार्थ परक छन, हामीलेखाली आम नेपाली युवाहरु जो प्रेममा छन,ति मध्येका केही युवा युवतीका कथाहरुलाईआवरणमा समेटका छौ, कथात्मक शैलीमा किन जोडिन्छ माया, किन तोडिन्छ माया ? केही घटना यस्ता हुन्छ। जुन पत्याउन गाहे हुन्छ, तर नपत्याई सुखै छैन । यो पनि यस्तै सत्य घटना हो । जहाँ आफ्नै प्रेमिलेप्रेमिकालाई मारेकाछन । यो घटना २०७५कात्र्तिकको दोस्रो सातातिर सार्वजनि भएकोहो । घटना भएको स्थान हो, भक्तपुर ।डेराबाट निस्किएकी २३ वर्षीया छोरीएलिसा नेपाली नफर्किएपछि उनको परिवारछोरी हराएको निवेदन लिएर कात्तिक १३मा महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाकोकार्यालय टेकु पुग्यो । अघिल्लो दिन बिहानडेराबाट निस्किएकी छोरी ‘खोजी गरिपाउँ’ भन्ने निवेदन दिन प्रहरी कार्यालयपुगेका एलिसाको परिवारसँगै थिए १९वर्षीय मुक्तिनाथ लामिछाने । एलिसाको परिवार आत्तिएको थियो, लामिछाने दुखी थिए ।युवती हराएको निवेदन आइरहने भएकालेप्रहरीले यो केसलाई पनि खास ठानेन । र,फोटो लिएर खोजीका लागि सर्कुलर गर्छौंभन्दै उनीहरूलाई फिर्ता पठायो ।निवेदन दिएकै दिन एलिसाकोमोबाइलबाट उनका बुबालाई फोनआयो । छोरी फेला परिन् भनेरदंग परेर मोबाइलउठाएका उनीझसंग भए ।छ ा ेर ी क ा ेफोनबाटएक युवकबोलिरहेको थियो,त्यो पनि हिन्दीमा । उसलेछोरी चाहिने भए १ करोड ५० लाखरुपैयाँ फिरौती माग्यो । उनले तत्कालप्रहरी महाशाखामा फोन गरेर यसबारेजानकारी दिए । यसपछि पनि परिवारप्रहरी कार्यालय पुग्यो । यसरी जाँदाहरेक पटक परिवारसँग लामिछानेसँगैहुन्थे ।कात्तिक २० मा भक्तपुर बोडेको सडककिनारामा बोराभित्र युवतीको शव फेलापरेको सूचना आएलगत्तै महाशाखाको टोलीघटनास्थल पुग्यो । टाउकोका गम्भीर चोटकिन जोडिन्छ माया, किन तोडिन्छ माया ?लागेको अवस्थामा फेला परेको शवकोअनुमानित उमेर र हुलिया हराएकी भनिएकीएलिसासँग मिलेपछि महाशाखाले उनको परिवारलाई खबर र्गयो । खबर आएको तेस्रोदिन अस्पतालमा रहेको शव हेर्न पुगेकाएलिसाको परिवारले शवको पहिचान गरे ।त्यसको दोस्रो दिन एलिसाको हत्यामा संलग्नरहेको आरोपमा तिनै लामिछाने पक्राउ परे ।हत्याको कारण देखियो सम्बन्धमा उब्जिएकोशंका । अुनसन्धानमा संलग्न महाशाखाकाप्रहरी अधिकारीका अनुसार ठिमी बस्नेलामिछाने र एलिसा बूढानीलकण्ठमा रहेकोरिफ वाटर प्रोसेस नामको पानी फ्याक्ट्रीमाकाम गर्थे । सँगै काम गर्ने क्रममा यी दुवैबीचमाया सम्बन्ध बन्यो । यो कुरा थाहा भए पनिउनी हराएदेखि नै खोजीमा युवतीको परिवारसँगै रहेकाले प्रहरीले तत्काल उनलाईअनुसन्धानको दायरामा नल्याई शंकाको घेरामा मात्रै राखेको थियो । ‘युवती हराएको दिनदेखि नै उनकोखोजीमा खटिएर लामिछानेलेप्रहरीलाई छक्याइरहेका थिए,’महाशाखाका तत्कालीनप ्रव त्त m ाए स प ीसहकुल थापाले भने, ‘उनले जति चलाखीगरे पनि जोगिन भने सकेनन् ।’आचरण ठीक नभएको भन्दै लामिछानेलाईकम्पनीले कामबाट निकालेपछि उनकोएलिसासँग खटपट सुरु भएको थियो ।यसबीचमा एलिसा अर्का युवकसँग निकटभइन् । आफू बेरोजगार भएपछि एलिसालेअर्कै युवकसँग सम्बन्ध गाँसेको भन्दै उनीमुर्मुरिएका थिए । तर, यसबारे एलिसालाईसोधेका थिएनन् । एसपी थापाका अनुसारयसबारे कुरा गर्न लामिछानेले कात्तिक १२ माएलिसालाई फोन गरेर फिल्म हेर्न गोपीकृष्णहल बोलाए । बिहान ९ बजे एलिसा हलपुगिन् । दुवैले चिया पिए र फिल्म हेर्नुकोसाटो बोडेमा रहेको लामिछानेको डेरामा गए। करिब १० बजे डेरामा पुगेपछि लामिछानेलेचिया पकाएर एलिसालाई खुवाए । चियाखानेक्रममा उनले एलिसाको दोस्रो मायाीबारेकुरा निकालेपछि विवाद सुरु भयो । आफूलाईधोका दिएको भन्दै लामिछानेले एसिलालाईधम्क्याए पनि उनले शंका नगर भन्दै प्रतिवादगरिन् । लामिछाने रिसले मुर्मुरिँदै कोठाबाटबाहिर निस्किए । केही समयमा उनी कोठामाफर्कंदा हातमा काठको मुंग्रो थियो ।त्यसैले उनले एलिसाको प्राणनगएसम्म लगातार हानिरहे ।अनुसन्धानमा संलग्नप्रहरी अधिकारीका अनुसारलामिछानेले १२ बजे दिउँसोएलिसाको ज्याकेट, ब्याग,जुत्ता, रगत लागेको कोठाकोकार्पेट बोरामा हालेर घरबाट करिब २ किलोमिटरपर रहेकोन ी ल ब ा र ा ह ीज ंग ल म ाल ा ग ेरफाले । कपडा फाले पनि शव कोठामै थियो । उनी कोठाबाट निस्किएर एलिसाको मोबाइल लिएर मूलपानी हुँदै कोटेश्वरमा पुगे र त्यहींबाट एलिसाका बुबालाई फोन गरेर एलिसाकोअपहरण गरेको भन्दै हिन्दी भाषामा १ करोड५० लाख रुपैयाँ फिरौती रकम मागेका थिए ।त्यसपछि उनी चाबहिल हुँदै बोडेको कोठामाफर्किएका थिए ।कोठामा पुगेर उनले एलिसाको शव डेरामारहेको कुखुराको दाना राख्ने प्लास्टिकको बोरामा प्याक गरे । राति १० बजे आफैंले बोकेरडेराबाट २ सय मिटर पर सडक किनारामाफालेर डेरामा फर्किए । घटनाको दोस्रो दिनउनी एलिसाको परिवारको सम्पर्कमा पुगे रउनीहरूसँगै प्रहरी कार्यालयमा ‘एलिसा हराएको निवेदन’ दिन गएका थिए । एलिसा हराउनु अगाडि लामिछानेसँग सम्पर्क भएकोर उनको परिवारलाई धम्क्याउन प्रयोगभएको मोबाइल नम्बरको लोकेसन बोडेतिरदेखिएपछि प्रहरीले उनलाई अनुसन्धानकोघेरामा राखे पनि पक्राउ भने गरेको थिएन। अपहरणकारी बन्दै उनले निरन्तर पैसामागेपछि प्रहरीले एलिसाको परिवारलाईफिरौती बुझाउन राजी छु भन्दै पैसा लिनउनलाई बोलाउन लगाएको थियो । उनीपैसा लिन आए । अपहरणकारीका रूपमापैसा लिन आएको व्यक्ति लामिछाने रहेकोखुलेपछि प्रहरीले पक्राउ र्गयो । कसलाई के थाहा ? मनमा कति पीडा छ । के गर्नु समयको खेला हो, समयले म संग खेल्यो, मेरो परिवार संग खेल्यो । के हो त्यो, को हो त्यो मलाई थाहा छैन, थाहा पाउन पनिचाँहदिन, जसबाट मेरो परिवार बिछोडियो,एकै झड्कामा को कहाँ को कहाँ सबै तितरबितर भयो । बस म यहाँ भएँ मेरो बाबासम्हालिनु भयो, अहिले म बाबाको साथमा छु,तर पनि त्यो अभाव सधैं खट्किने रहेछ । त्योछायाँले सधैं पच्याई रहेछ,बाटोभरी अरुको आमा छोरा,आमाछोरी हिंडेको देख्छु,बोलेको देख्छु । मुटु पोल्छुमेरी आमा हाम्रो साथमाभईदिएको भए कति जातीहुन्थ्यो ।कुन प्रेमले मेरो ममीलाईडोर्यायो, कस्तो प्रेम त्यो,कस्तो भोक हो, जसलेआफ्नै छोरालाई पनि छोरादेखेन, आफ्नै पतिलाई पनिपति देखेन । एउटा बिरानोनै भनौं, त्यो व्यक्तिको पछिलागेर हामीलाई यहाँ छाडिगयो । यो त्यही चोक हो,जसले मलाई प्रत्येक पल्ट१० बर्ष अगाडिको धकेलिदिन्छ, १० बर्ष अघिको पीडासम्झाई दिन्छ, अनायसैआँखाबाट आसुँ बग्छन ।आमाको मन कति नरमहुन्छ, कति फराकिलो हुन्छभन्थ्ये । पछि के होला मलाईथाहा छैन तर आजसम्मको घटना हेर्दा मलाईलाग्यो त्यो ईतिहाँसमा मात्र हुने रहेछ । मेरोहकमा त्यो भएन, अरु केहीको हकमा पनित्यो नभएको हुनसक्छ । तर कसैलाई पनियस्तो नहोस, जुन मेरो परिवारमा भयो ।होमवर्क गरेन भने कक्षामा सर र मिसलेपिट्थे, राती ढिलासम्म होम वर्क गरें । सधैंपाँच बजे उठ्थें । सायद त्यो दिन म अलिढिलो उठ्थे होला । सानै थिए, अन्दाजी १०बर्षजतिको । यति बेलासम्म उठ्नु पर्देन, छबजिसक्यो, ओच्छ्यानमा थिए ममीको कर्मसआवरणआवाज सुने । ...................... तेरो वाउलाईहाम्रो मतलव छैन, बिदेशमा....................संग मस्ती गरेर बसिरहेको होला, मलाईभने संधैको यो टेन्सन । छिटो उठ् स्कुलजान ढिला हुन लागिसक्यो, तयार हो छिटो,म खाना पस्किन्छु । आफ्नै ममी हो मेरो,ममीको त्यो एकै बिहानै गाली सुनेर आँखाटिलपिलायो, मन भारी भयो । मन थाम्नसकेन, घोप्टो परेर रोएं । सोंचे भर्खर छ नै तबजेको थियो, स्कुलको गाडी आठ बजे आउँछ,फेरि त्यो चोकमा पुग्न, पाँच मिनेट त लाग्छयहाँबाट, स्कुल जाने पढ्ने त म हो नि तरसंधै ममीलाई किन हतार हुन्छ, यस्तै सोच्दैमुख धोएं । कपडा लगाएर खाना खाँए । सातबजे नै गाडी आउन चोकमा पुग्यौं । चोकमापुग्दा मेरो कक्षाको साथी पनि उसको बावासंगत्यही आईपुगेको रहेछ ।सुबु कति छिटो आएको ? उसले सोध्यो ।गाडी आठ बजे आउँछ, हेरन मलाई भन्दामेरो ममीलाई हतार हुन्छ, मलाई यहाँ पुर्याउन, मैले रुन्चे स्वरमा भने । मेरो पनित्यही हो, मलाई भन्दा मेरो डया्डीलाई हतारहुन्छ, त्यही भएर त तिमी भन्दा पहिला मयहाँ आईपुगेको नि, उसले भन्यो । स्कुलकोगाडी आउन झण्डै एक घण्टा बाँकी थियो ।हामी बस ट्रया्कमा राखिएको कुर्सीमा बसेर,किताव हेरिरह्यौं । देखें अघि मलाई गाली गर्नेमेरो ममीको मुहारमा हाँसो आएको । सानैथिए । त्यसको मतलव नबुझ्ने पक्कै थिईन। मेरो ममी मेरो त्यही साथीको ड्याडीसंगहँसिमजाक गरिरहनु भएको थियो । यो मैलेमात्र देखेको थिईन, उसले पनि देखेको थियो ।ममी संगै साथीको ड्याडी पनि निकै नै खुसीसाथ कुरा गरिरहनु भएको थियो । नजिकबाटयो दृष्य हामी दुबैले हेरिरहेका थियौं । गाडीआयो, दुबै स्कुल बसमा चढ्यौं, बाई बाई गर्नमेरो हात नै उठेन । तैपनि पिडा लुकाएर भनेबाई ममी । बिहानको गाली सम्झै, बिदेशमारहनु भएको बाबालाई सम्झें । आँखा फेरिटिलपिलायो, भने मिस यु ड्याडी आई मिसधधध।थगदबजगलपबच।अयm युवा हुङ्कार ज्ञघयु सो मच, आई एम अलवेज विथ यु । गाडीलेत्यो चोक पार गरिसकेको थियो । त्यसपछिमेरो ममी र साथीको ड्याडी त्यहीं कुरा गरेरबस्नु भयो, या अन्यत्र जानु भयो, थाहा भएनमलाई । स्कुलमा पुगेर पढ्न थाले । दिनभरीममीको गाली सम्झें, त्यो कर्कश रुखो बोलीसम्झै, अनि फेरि सम्झें त्यो साथीको डयडीसंगको ममीको हंसिमजाक, त्यो मिठो बोली ।मनमा पीडा भयो, सोंचे त्यही मिठोबोली ममीले परेदशमा रहेको ड्याडी संगबोलिदिएको भए, म संग बोलिदिएको भए,हामी कति खुसी हुने थियौ । लाग्यो त्यो खुसीहाम्रो भाग्यमा लेखेको नै रहनेछ । दिन बितिनै रह्यो, जसरी हिंजोको दिन बितेको त्यो, त्योचोक, त्यो ममीको कर्मस गाली, अनि साथीकोड्याडी संगको ममीको रोमान्स, हँसिमजाकसमय खासै परिवर्तन भएन, संधै उस्तै । खैरपढ्दै गए, । जीवनमा गुनासाहरु धेरैछन तरकति गुनासाहरु गर्ने, को संग गर्ने, मेरो जस्तोउसको पनि गुनासा होलान, पीडा होलान,ढोका थुनेर रुन्थे । पीडाले यति धेरै मुटु दुख्थो,त्यही दुखाईले बिरक्तिदा कयौं रात भोकै सुते। तर जीवन हो, उतारचढाव धेरै हुन्छन, तरजीवनमा कर्म गर्न कहिले छाडिँन, त्यो कर्मअर्थात पढाई कै कारण त्यति धेरै पीडाकाबावजुत पनि सर्घष गर्दे गएं ।सानो भएपनि समयले मलाई पाको बनाउँदैलग्यो पढाई राम्रै थियो मेरो । कहिलेकाँही धेरैबिरक्त लाग्दा ड्याडीसंग कुरा गर्थे, तर बिरक्तीएर होईन खुसी छु जस्तै गरी कुरा गर्थे ।मैले यहाँबाट निरास भएर कुरा गरें परेदशमाड्याडीलाई कस्तो होला यही सोच्थे, ड्याडीलाई कतिपनि पिडा देखाईन । म नौकक्षा पढ्दै थिंए । बहाना र्मै भनौ मलाईचोकसम्म पुर्याउन जाने ममीको दिनचर्यारोकिएको थिएन । त्यो दिन पनि ममीमलाई पुर्याउनु आउनु भयो । म गाडीबसें । ममीले बाई बाई गर्नुभयो । धेरैपछि, किन बाई बाई गर्नुभयो, तत्कालमैले बुझ्न सकिन, सायद । मैले टाढैबाट भएपनि ममीको अनुहारमा हेरैं ।केही निरास देखें, उदाश देखे ।स्कुल छुटी भयो, घरमा आए, ममीहुनुहुन्न थियो । सोचे कतै जानु भएकोहोला, आउनु हुन्छ होला, म कुरेर बसे,आउनुभएन । कुर्दा, कुर्दा रात बित्योतर ममी आउनु भएन । खोज्नकहाँ जान, कसलाई सोध्ने केही पत्तो पाईन। रातभरी नसुतेर आँखा रातो भएको थियो। बिहान हुंदासाथ यता उता, बस्ने अंकल,आन्टीहरुलाई ममीको बारेमा सोंधे तरकसैबाट पनि उत्तर पाईन । बिहानको आठबज्न लागेको थियो । स्कुल जाने नजाने, कसरीजाने केही निर्णय लिन सकिन । चोकमा गए,तर त्यो चोकमा स्कुल जानको लागि न मेरोत्यो साथी आयो, न उसको ड्याडी नै । मसरासर उसको घरमा पुगें । उसको घरकोअवस्था पनि मेरो जस्तै रहेछ, साथी भन्दैथियो, हिंजो देखि डयाडी घर आउनु भएकोछैन, ममीले एकदम पिर गर्नुभएको छ । कहाँजानु भयो होला । उनीहरुको कुरा सुन्ने बित्तिकैमैले, आन्टी मेरो ममी पनि हिंजो देखि आउनुभएको छैन । ड्याडी परदेशमा हुनुहुन्छ ।रातभरी ममीलाई कुरेर बसे तरआउनु भएन । हजुरहरुलाईकेही थाहा छ कि भनेरसोध्न आएको हो ? खैकहाँ जानु भयो, हामीस्कुल जाँदा मेरो ममी रयहाँको ड्याडी सधै कुरागरेर बसिरहेको देख्थ्यौंह ा म ी ल े,दुुबैलेएकै स्वरमा भने । हाम्रो , कुरा सुनेर साथीकोममीले अनुमान लगाउनु भएको रहेछ, मेरोममीलाई लिएर साथीको ड्याडी घर छोडेरबाहिर बस्नु भएको छ भने ।फोन सबै अफ थियो सम्पर्क कंही कतैबाटपनि भएन । कतैबाट ममीको पत्तो लागेन । एक हप्तासम्म ममीको खोजीमा यता उताहिंडेै बाटोमा भेटिएका जतिलाई ममीकोफोटो देखाउँदै सोधे, उहाँलाई देख्नु भएको छ,भनेर तर सबैको देखेको छैन, भन्दै टाउकोहल्लाए । ममी फर्कने आशा आसामा नैसिमित भयो । अनि मैले बुझे, त्यो दिन किनममीले मलाई बाई बाई गर्नुभएको रहेछ ।त्यसपछि मैले ममीलाई खोज्न छाँडे, तर आशगर्न छाडिन, निरास भएर ड्याडीलाई फोनगरें, भने डया्डी ममी घर नआउनु भएकोएक हप्ता भयो, म एक्लै छु, मोवाईल अफछ, खोज्ने जति सबै ठाउँ खोंजे तर कँहीभेटिन ड्याडी, मेरो यो कुरा सुन्ने बित्तिकैड्याडी डाँको छोडेर रुनुभयो, मन थाम्नसकेन, डया्डी संगै रोएं म धेरै रोए ।बावु कसलाई पो रहर हुन्छ र परेदशमाआएर काम गर्न, हाम्रो खुसीको लागियहाँ काम गर्न आएको । तर हामीलाईकसैले आफ्नो देखेन, आफ्नोठानेन, छाडेर गयो, यसोभन्दै ड्याडी रुनुभयो। बावु तिमी ज्ञानीभएर बस, म छिटैआउँछ,ु । तिमीलेरत्ति पनि पीरनलिनु बावु मछिटै आउँछु ।जसले हामीलाईछाडेर गयो, उसलाई खोजेर पछिलाग्नु पर्देन, जतिबेला उसलाईहाम्रो अभाव महसुस हुन्छ, आफ्नो गल्ती महसुस हुन्छ, त्योफर्केर आउँछ, अहिले उसकोपछि नलाग, आमा हो तिम्रो, तरआमाले आाफ्नो छोरालाई आफ्नोनठानी अर्को व्यक्तिसंग गएपछि हामीलेकिन त्यस्तो मान्छेलाई काँखी च्याप्नेभन त तिमी, ज्ञानी छौ, बावु म छुम आउछु, बावु ज्ञानी भएर पढसबै ठिक हुन्छ । ड्याडीको योकुरा सुनेर झन थाम्न सकिन,ज्ञद्ध युवा हुङ्कार धधध।थगदबजगलपबच।अयmआवरणरुदै भने, डया्डी मेरो चिन्ता नलिनु म सानैछु, तर समयले मलाई पाको बनाएको छ ।म खाना बनाउन, कपडा धुन, आफ्नो कामसबै गर्न सक्छु, मेरो चिन्ता नलिनु । हामीलाईयहाँ हाम्रो आफ्नो सानो घर बनाउनु छ,त्यसैको लागि हजुर त्यहाँ जानु भएको हो,यहाँ आएपछि फेरी त्यहाँ जान अप्ठेरो हुन्छ। हुजुर अझै केही समय बस्नु होला, म यहाँसबै गर्छु ड्याडी । मेरो यो कुरा सुनेर ड्याडीलाई केही हौसला मिल्यो, आखिर छोरात मेरो होनी । ड्याड्डीले भन्नुभयो ।त्यसपछि ड्याडीले दिनहुं जसोफोन गर्नुहुन्थ्यो,खाना खाएकोनखाएको, सबैकुरा सोध्नु हुन्थ्यो। मेरो काम बढेकोथियो । सबै कामगरेर, कोठामाचावी लगाएर मस्कुल जान्र्दै, प्रत्येकमहिना ड्याडीलेपैसा पठाउनु हुन्थ्यो। त्यो पैसा मेरोस्कुल फि, कोठाभाडा, खाना खाजासबै पुग्थ्यो मलाईकुनैपनि कुराकोकमी हुन दिनुभएनड्याडीले । म स्कुलजान्थे, बिगतमाजस्तो पुर्याउने आउने कोही हुने थिएनन,चोक कस्तो नरमाईलो लाग्थ्यो, साथी पनिएक्लै स्कुल आँउथ्यो । एक दिन अकस्मातसाथीले भन्यो, सुवु मेरो ड्याडी र तिम्रोममी आज घरमा आउनुभयो, राती उसकोकुरा सुनेर म छाँगाबाट खसे जस्तै भएन, रातभरी दुई जना मिलेर मेरो ममी संग झगडागर्नुभयो । ममी धेरै रुनुभयो सुबु । आज मर ममी भान्छा कोठामा सुतेको हो । अहिलेम स्कुल आए, घरमा ममी एक्लै हुनुहुन्छ,अहिले पनि मेरो ममी संग उनीहरु झगडागरिरहेका होलान, उसले रुदै भन्यो । मैलैउसलाई अँगालो हाँले, पीडा सबैको एउटै हो,सबैलाई दुख्छ, उसको आँखा टिलपिलाए । आशुपुछिदिए । साथी हो, उ मेरो हिंजो पनि साथीथियो आज पनि साथी हो, धेरै मिल्ने, समाजलेभन्ला हाम्रो नाता फेरिएको छ, तर त्यो नातामान्ने पक्षमा म छैन, उ मेरो साथी हो, सबैभन्दा माथि छ उ । मैले उसलाई सम्झाए, पीरनगर्नु भने । भालि पल्ट पनि हामी स्कुल गयौं,उसले भन्यो सुवु हिंजो दिउँसो ड्याडीलेममीलाई पिट्नु भएछ, अनि तिम्रो ममी संगघरमा भएको सुन, सबै पैसा लिएर जानु भएछ। उसले रुदै भन्यो । मैले उसलाई सम्झाए,उसको घरमा गएं । ममीलाई सम्झाए,हिंजोका दिनको जस्तो उनीहरुको आर्थिकअवस्था थिएन । मैले ड्याडीले मेरो लागिपठाउनुभएको पैसा बचाएर साथीलाई सहयोगगर्थे, साथीको ममीले मलाई धेरै प्रेमँ गर्नुहुन्र्थो। उहाँबाट मैले निरन्तर आमाको प्रेमँ पाई रहें। दिन बितिर्यो यसरी नै । हामी दुबै जनाले राम्रो अंक ल्याएर एसएलसी पास गर्यौ । सोपश्चात पढाई सगै काम गर्न थाल्यौं, हामी दुबैजना एउटै अफिसमा काम गर्न थाल्यौं । त्यहीअफिसमा काम गर्न थालेको पनि लगभग चारबर्ष भईसक्यो, त्यो अफिसमा हाम्रो आम्दानी राम्रो छ, हामी दुबै जनाले उक्त अफिसमा उच्चतहमा बसेर काम गरिरहेका छौ ।डयाडी पनि बिदेशबाट फर्किसक्नु भएको छ। अहिले हाम्रो सानो घर छ, डयाडीले नेपालमै एउटा सानो बिजनेस सुरु गर्नुभएको छ। साथीको पनि घरगाडी सबै छ, साथीकोडयाडी हुनु हदैन, सवथोक ममी हुनुहुन्छ ।मेरो ममी हुनुदैन, सवथोक डयडी हुनुहुन्छ ।सबै काम हामीले मिलेर गछुों । म सधैं यहीचोक भएर अफिस जान्छु, गाडी रोकेर बिगतसम्झन्छु मनभरी पिडा हुन्छ । ममी त ममीहोनि, ममी मुर्ख हुनु भयो, हामीलाई आफ्नो ठान्नुभएन । तर डयाडीले र मैले त संधैममीलाई आफ्नो ठानेका छौं, आफ्नो मानेकाछौं, त्यही भएर त अहिलेसम्म पनि उहाँलाईकुरी राखेका छौ, यही चोकबाट छुटिएकाथियौं, यही चोकमा ममी भेटिनु हुन्छकी किभनेर गाडी रोकेर परसम्म हेर्छु । बाटोभरीआँखा बिच्छाई रहेको छु, सायद ममी आउनुहुन्छ, भनेर, बाटो बिराएर जानु भएको ममीत्यही मुलबाटो सम्झेर आउनु हुन्छ भनेरकुरिरहेको छौ, बस् कुरिरहेका छौ, आज आउनुहुन्छ होला भनेर अहिले आउनु हुन्छ होलाभनेर........................... । आखिर प्रेममा के खोजिन्छ ? प्रेममा बहकाव हुन्छ । प्रेमँ केवल शारीरिक आकर्षणबाट सुरु हुन्छ । प्रेमँमा फसेका युवायुवतीहरुलाई एकअर्काको सामिप्यता भएपुग्छ । गफ गरौं, डेटिङ जाऔं, रोमान्स गरौं ।यस्तै चक्करमा हुन्छन् उनीहरु । र, यस्तो बेलाएकअर्काको आनीवानी, प्रवृत्ति, स्वभावबारे खासहेक्का हुँदैन । वा कसैको प्रवृत्ति र स्वभाव केलाएरकसैले प्रेम गर्दैन । यसको अर्थ युवाहरु प्रेमगर्नका लागि युवतीहरुमा धेरै मापदण्ड आवश्यकदेख्दैन । केवल प्रेमिल मन र शारीरिक आकर्षकभए पुग्छ । युवाहरु जसलाई प्रेम गर्छन्, उनैलाईआफ्ना भावी दुलहीको रुपमा देख्छन् भन्ने छैन ।किनभने जस्तो प्रेमिकासँग रोमान्स गर्न चाहन्छन्,जीवन व्यतित गर्नका लागि भने फरक किसिमकोपार्टनर खोज्छन् । प्रेम त वैंशालु उमेरको लहडपनि हो । तर, जीवन लहडले चल्दैन । जीवनचलाउनका लागि पर्र्फेट पार्टनरको जरुरी हुन्छ। जब पार्टनरसँग व्यवहारिक तालमेल मिल्छ,भावनात्मक तालमेल मिल्छ, तब मात्र परिवारको रथ अगाडि बढ्छ । अन्याथा दाम्पत्य जीवनखल्लो र बेसुरको हुनपुग्छ ।त्यसैले पुरुषहरु विवाहअघि आफ्ना दुलहीबारेनिकै सोचमग्न हुन्छन् । दुलहीको रुपमा भित्र्याउनेयुवतीको रुपरंग मात्र होइन, स्वभाव, प्रवृत्ति,चालचलन सबै कुरामा घोत्लिने गर्छन् । यस्तोयुवतीसँग उनीहरु आफ्नो जोडी बाँध्न चाहन्छन्,जसले पारिवारिक जीवनलाई सहज र अर्थपूर्णबनाउन सहयोग गर्छ । जीवनका अप्ठ्याराहरुमासाथ दिन्छन् । सुखमा रमाउन र दुःखमा साथ दिनतयार हुन्छन् । पारिवारिक संस्कार र चालचलनलाईआत्मसात गर्छन् । आफ्ना मातापिता, इष्टमित्रलाईसम्मान गर्छन् । घरायसी वातावरण प्रेमिल र रंगिनबनाइदिन्छन् । सबैलाई उत्तिकै स्नेह, ममता गर्छन्। यस्तो युवतीलाई दुहलीको रुपमा भित्र्याउनचाहन्छन् । आफ्ना पार्टनर वा दुलही समझदारहोस् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वभाविक हो । किनभनेजब दुई भिन्न पारिवारिक पृष्टभूमीमा हुर्किएकायुवा र युवती एकाकार हुन्छन्, उनीहरुबीच कतिपयकुराहरु मिल्दैन । कति कुरामा उनीहरुको धारणासमान हुँदैन । बानी व्यवहारमा पनि एकरुपता हुँदैन। पारिवारिक चालचलन फरक हुनसक्छ ।यस्तो अवस्थामा आफुले भित्र्याएकी दुलहीसमझदार होस् भन्ने अपेक्षा राखिन्छ । जबदुलहीले फरक पृष्टभूमीमा आफुलाई एडजस्ट गर्नसक्छन्, फरक चालचलनमा आफुलाई अभ्यस्तगराउन सक्छन्, तब मात्र पारिवारिक जीवनसुखमय हुन्छ ।अहिलेको हाम्रो आधुनिक समाजले संस्कारको कुरा गर्दा ‘आडम्बर’ भन्न सक्छन् । कथितशिक्षितहरु संस्कारलाई ‘पुरानो चलन’ मान्छन्। जबकी संस्कार भनेको जीवन, परिवार रसमाजलाई एउटा व्यवस्थित लयमा डोर्होयाउनेमाध्यम हो । हरेक घर,परिवारको आफ्नो संस्कारहुन्छ । त्यही संस्कारलाई नियमपूर्वक पालनागरेकाकाले नै उनीहरु पथभ्रष्ट हुँदैनन् । यसमाकुन समयमा उठ्ने, कुन समयमा खाने, कसरीमर्यादा पालना गर्ने, कस्तो खानपान गर्ने, कस्तोबोलीचाली अपनाउने भन्ने यावत् कुरा पर्छ ।अहिलेको समाजमा प्रेम, ममता हराउँदै गएको छ। व्यक्ति एकलकाँटे हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामासबैसँग प्रेममय सम्बन्ध स्थापित गर्ने पारिवारिकसदस्यको उपस्थिती महत्वपूर्ण भएको छ ।आफ्ना श्रीमानलाई भौतिक रुपमा मात्र साथ दिनेहोइन, प्रेममय वातावरणमा रमाउन दिने हुनुपर्छ। दाम्पत्य भनेको केवल भौतिक सम्बन्ध मात्रहोइन, त्यसलाई जोड्नका लागि प्रेमरस चाहिन्छ। आपसी प्रेमले नै दाम्पत्य सम्बन्धमा मिठास भर्छ। श्रीमतीको रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नेमात्र नभई प्रेममय सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। अक्सर श्रीमान् आफ्ना दुलहीबाट यस्तै अपेक्षागर्छन् ।विवाह गरेपछि एउटाको भर अर्कोलाई हुनुपर्छ ।अर्थात एकअर्काको आड(भरोसा, साथ(सहयोगचाहिन्छ । माटोको भर ढुंगालाई, ढुंगाको भरमाटोलाई भनेजस्तै श्रीमान्(श्रीमतीबीच सहयोगीसाथ चाहिन्छ । जब यस किसिमको भावना रव्यवहारमा तालमेल मिल्छ, तबमात्र दाम्पत्यसम्बन्ध सहज हुन्छ । परिवारमा हरेकेको आआफ्नै दायित्व हुन्छ । एकअर्काको दायित्वलाईबुझेर, बोध गरेर आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुपर्छ। घर परिवारको अवस्था के छ ? कस्तो समस्याछ ? यसबाट कसरी उम्कने भन्ने कुरामा पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रेममा को कति सर्मपित ? नेपालमा युवा प्रेम र सम्वन्धका बारेमा एउटा अनुसन्धान भएको थियो । नेपाल डेमोग्राफ्रिक एन्डहेल्थ सर्वे, २०११ नाम दिएको उक्त अनुसन्धानमामा १५ देखि २५ वर्ष समूहका युवा–युवतीको एकबर्षसम्मको प्रेम सम्वन्धको बारेमा अध्ययन गरिएको थियो । अध्ययनका क्रममा उक्त समूहकामहिलाले श्रीमानसँग मात्र यौन सम्पर्क हुने गरेकोबताए । त्यस्ता महिलाको आँकडा सन् २००६ मा९९ दशमलव सात र सन् २०११ मा ९९ दशमलवपाँच प्रतिशत थियो । दुवै सर्वेको आँकडामा ठूलोफरक देखिएन ।अध्ययनका क्रममा यो प्रवृत्ति पुरूषमा भने फरकदेखिएको थियो । वैवाहिकसम्बन्धमा रहेकामा सन्२००६ मा ८२ प्रतिशतलेआफ्नै श्रीमतीसँग शारीरिकसम्पर्क राखेको बताएकाथिए । सन् २०११ मा भने६५ प्रतिशतले मात्र त्यस्तोजवाफ दिए । केही पुरुषलेत यौन व्यवसायमा लागेकामहिलाहरूसँग शारीरिकसम्पर्क हुने गरेको समेतबताए । प्रेमि–प्रेमिकामध्येसन् २००६ मा ११ प्रतिशतकेटाहरूले पे्रमिकासँगशारीरिक सम्बन्ध भएकोबताएका थिए । सन् २०११मा आइपुग्दा उक्त आँकडा३१ दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको पाइएको छ ।यसबाट देखिन्छ, विवाहअघिको यौन सम्बन्धको’ट्रेन्ड’ बढ्दो क्रममा छ । केटीहरूले भने दुवै सर्वेमा खुलेर बताएनन् । अझैपनि ’क्लोज्ड’ छ, नेपाली समाज । लोकलाजकोडर केटामा भन्दा केटीमा बढी छ । सन् २००६मा शून्य दशमलव एक प्रतिशत केटीले मात्रविवाहअघिको यौन सम्बन्ध स्वीकारेका थिए ।सन् २०११ मा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतलेप्रेमिसँगको यौन सम्बन्ध स्वीकारेका थिए । संसार२१ औं शताब्दीमा छ । र, प्रेमको परिभाषामापनि अघिल्ला शताब्दीमा भन्दा परिवर्तन आएकोछ । युवा–युवतीलेप्रेमलाई सैद्धान्तिकभन्दाव्यावहारिक रूपमालिन थालेका छन् ।हलिउड र बलिउडफिल्म तथा इन्टरनेटको सहज पहुँचलेउनीहरूको धारणामानिकै परिवर्तन ल्याएकोमान्न सकिन्छ । प्रेमसम्बन्ध हुन्छ भने त्यहाँयौन हुनु आपत्ति होइन। तर, सम्बन्ध कतिकोस्वस्थ छ र कतिकोसमझदारी छ भन्नेख्याल गर्नुपर्छ ।’संसारले ’इन्स्ट्यान्ट’ जमानाको अभ्यास गर्दैगर्दा नेपाली समाजले प्रेम र यौनलाई सांस्कृतिकसंकुचनमा राखेको छ । यौनले सम्बन्धलाईअझ सबल बनाउँछ भन्ने बुझेका युवा–युवतीपनि प्रेमको दुरुपयोग नहोस् भन्ने कुरामासचेत देखिन्छन् । अहिलेका युवाले प्रेमकोअर्थ सेक्ससँगै लगाउन थालेका छन् । हुन त,प्रेममा परेपछि आकर्षणको चरण आउँछ । यौनप्राकृतिक चाहना पनि हो । ’यदि समाज र परिवारले यस पक्षलाई खुलेर बुझाउन सके शायद युवा–युवतीको कौतुहलता मेटिन्छ, । के भन्छ शास्त्रले ? ज्योतिषहरुका अनुसार १२ वटा राशीहरु मध्ये पाँच वटा त्यस्ता राशीहरु छन जुन राशीभएका युवा युवतीहरुले प्रेमँमा कहिले पनिधोका दिदैनन । प्रेमँमा सर्मपित रदत्तचित्त हुन्छन । एकअर्कालाई कुनैपनि समय परिस्थितीमा धोका नदिनेखालका हुन्छन ।बृष राशिबृष राशिका मानिसहरु धेरै नै शान्तस्वाभावका हुन्छन् । जुन युवतीकोराशि वृष हुन्छ उनी प्रेमकोसम्बन्धमा कहिले पनि धोका नदिनेखालकी हुन्छिन् भन्ने मान्यता छ। यस राशिकी युवतीले आफ्नोपार्टनरलाई धेरै नै प्रेम गर्छिन् । कन्या राशिकन्या राशि भएकाहरुलाई धेरै नैसमझदार मानिन्छ । कन्या राशिभएकी युवतीले पनि प्रेममा कहिलेके भन्छ शास्त्रले ?पनि धोका दिँदैनन् ।वृश्चिक राशियो राशिका मानिसहरु धेरै नै भावुक मानिन्छन्। यस राशिकी युवतीहरुले आफ्नो पार्टनरलाईसाँचो प्रेम गर्ने खालका मानिन्छन् रयिनीहरुले सम्बन्धको महत्वसमेत राम्ररी बुझेका हुन्छन् ।कर्कट राशियो राशिका युवतीहरु निकै नै भावुकहुन्छन् । त्यसैले यिनीहरु आफ्नोपार्टनरलाई धोका दिँदैनन् राआफ्नोपार्टनरलाई धेरै नै प्रेम गर्छन् ।मकर राशिमकर राशिका युवतीहरु पनि धेरै नैभावुक खालका हुन्छन् । यिनीहरु जबकुनै केटासँग प्रेम गर्छन् तब पूरासच्चाइका साथ गर्छन् र कहिले पनिअलग हुन चाहँदैनन् ।
Posted on: 2019-Feb-1
देश कतातिर ......?
बिपदका सारथीहरु ....
साबधान ! असुरक्षित बन्दै लाखौ ATM
चुनाव र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सुगा रटाई
भुुकम्पको १५ महिना, के पाए जनताले ?
जनतालाई दुख दिने खेल
चुल्हो निभ्यो, किन बोल्दैन, सुन्दैन सरकार
किन जल्दै छ मधेश ? अघोषित नाकावन्दी र संबिधान, सास्ती अब कति ?